Push Type Mascara Filling Machine, Flat Labeling Machine - I-Eugeng
U-Eugeng ungumkhiqizi osebenza ngobuciko nobuciko bemishini yezimonyo eShanghai. Silwela njalo ukuliqinisa ukuthi liyakhula idumela ngaphakathi kwemboni yezimonyo ngokuhlangabezana nezidingo zokukhiqizwa kwamakhasimende, futhi lizohlinzeka ngobuchwepheshe bamuva futhi obuphakeme kakhulu nemininingwane yesixazululo esihle ngokuba njalo kusengaphambili kwesidingo sekhasimende. Imishini yethu eyinhloko ifaka umshini wokugcwalisa i-lip gloss, umshini wokugcwalisa i-mascara, umshini wokugcwalisa i-nail polish, umshini wokugcwalisa oshisayo, umshini wokugcwalisa i-lip balm, umshini wokugcwalisa izindebe, umshini wokugcwalisa ukhilimu we-swirl, umshini wokucindezela i-powder wezimonyo, umshini wokugcwalisa i-powder, umshini wokwenza powder owenziwe , i-lip gloss mascara labeling machine njll.
I-Eugeng International Trade Co., Ltd.
Umqondo wethu womkhiqizo "ezempilo, ezemfashini, ezobuchwepheshe". Ukuqashelwa kwamakhasimende kuphela okungabonisa inani lethu. Sibeka ikhwalithi yemikhiqizo kwasekuqaleni!
Okokuqala, ukuxuba, 1 setha ithangi lokuxuba elingu-20L; Isivinini Ukuxuba kungaba adjustable; Isixhumi sesikhuhli sikhumula kalula futhi sakha kabusha; Isikhathi se-CW nesikhathi seCCW siyashintsha; I-Tank ingavula i-90degree ukukhishwa kalula okwesibili, i-extrusion, i-1 set 10L tank; Intulo ...
Ngo-2020, siya embukisweni we-CBE eShanghai kusuka ngoJulayi 8 kuya ku-12. Sibonisa imikhiqizo yethu eyinhloko, njengomshini wokugcwalisa i-lip gloss, umshini wokugcizelela i-lip gloss mascara wokugcwalisa umshini, umshini wokucindezela i-compact powder, umshini wokulebula oqondile, i-cosmet ...